Rakotovazaha Olivier : "Mampangidy hoditra i Sylla"
Nohamafisin-dRakotovazaha Olivier, mpikambana ao amin’ny birao pôlitikan’ny Mfm, omaly tao amin’ny Aceem Radio, fa mampangidy hoditra ny Filoha Ravalomanana ny Praiministra Sylla.
Notsindriany koa fa fitondrana tetezamita no nisy teto Madagasikara ny taona 2002, satria ny nifanarahana tany Dakar dia ny fampandrosoana ny fotoana anaovana ny fifidianana solombavambahoaka no toy ny fihodinana faharoa tamin’ny fifidianana filoham-pirenena.
Momba ny famotsoran-keloka amin’ny raharaha 2002 moa dia navoitran’ity ministry ny fitaterana teo aloha ity fa ilaina izy io, saingy ankinina amin’ny fitsarana ny fanatanterahana izany. Ho an’ny Mfm dia "amnistie des actes et des faits" no heveriny fa mahasoa ny firenena.
Raha eo amin’ny lafiny fanaovan-dalana dia nambarany fa raha 8000 km ny lalana voarakotra tara tamin’ny Repoblika voalohany teto Madagasikara, dia na izay efa vita tamin’izany fotoana aza tsy vitan’ny fitondrana ankehitriny ny tena fanarenana azy fa mbola maro ny potika, ary ao ny tsy azo andehanana intsony.